የህወኣት ተራ መግለጫን እንዲሁም አዲሱን የጠ-ሚ ዶ-ር አብይን ሹመትና ህወሀት ለነባር አባሎች በመግለጫው እውቅና ይሰጥ ማለቱን ጋዜጠኛ ሴሳይ አጌና በደንብ ተንትኖ አስቀምጦታል ይደመጥ – Kichuu
HomeAfaan OromooTVየህወኣት ተራ መግለጫን እንዲሁም አዲሱን የጠ-ሚ ዶ-ር አብይን ሹመትና ህወሀት ለነባር አባሎች በመግለጫው እውቅና ይሰጥ ማለቱን ጋዜጠኛ ሴሳይ አጌና በደንብ ተንትኖ አስቀምጦታል ይደመጥ
የህወኣት ተራ መግለጫን እንዲሁም አዲሱን የጠ-ሚ ዶ-ር አብይን ሹመትና ህወሀት ለነባር አባሎች በመግለጫው እውቅና ይሰጥ ማለቱን ጋዜጠኛ ሴሳይ አጌና በደንብ ተንትኖ አስቀምጦታል ይደመጥ
Ethiopia አንዳንድ የደናቁርት ስብስብ አቶ አንዳርጋቸው ፅጌ #BBC_HARDtalk ላይ ቀርቦ ተኩሰናል ሀያ ሰው ገለን ሰላሳ አቁስለናል እንዲል ይፈለጋል:: ከንቱ ሁላ! አንዳርጋቸው ኤርትራ በርሀ ድረስ ሄዶ ግንቦት ሰባትን የመሰረተው ውሀ ሊረጭ ወይም ተኩስ ልምምድ ሊያደርግ አደለም:: በዛላይ አንዲ ወደ እንግሊዝ በወጣና በገባ ቁጥር በተለይ ኤርትራ ሲመላለስ የእንግሊዝ መንግስት አውሮፕላን ጣቢያ ውስጥ የተለየ የሴኪዩሪቲ ጥያቄና ፍተሻ ያደርጉበት እንደነበር ማወቅ ይጠይቃል:: በእንግሊዝ ሀገር ህግ መንግስትን በመሳሪያ ታጥቀህ ለመጣል መሞከር ወንጀል ነው ስለዚህ አንዳርጋቸው አዎ ተኩሰናል ገለናል ብሎ #HARDtalk ላይ እንዲያወራልህና እንዲናገርልህ ከፈለክ አንተ የደናቁርት ስብስብ ነህ ማለት ነው:: በቅርቡ እንኳን የእንግሊዝ መንግስት የአንዲን ትግል አጋር ዶ/ር Tadesse Biru Kersmo ን ምን እንዳረጋቸው አስተውል ወይም ተመልከት::
BBC HARDtalk 14/06/2018 Andargachew Tsege
#Ethiopia : የህወኣት ተራ መግለጫን እንዲሁም አዲሱን የጠ/ሚ ዶ/ር አብይን ሹመትና ህወሀት ለነባር አባሎች በመግለጫው እውቅና ይሰጥ ማለቱን ጋዜጠኛ ሴሳይ አጌና በደንብ ተንትኖ አስቀምጦታል ይደመጥ
#Ethiopia : ግዜ አትፈጅም ስድስት ደቂቃ ነች ይደመጥ!
MM Dr. Abiyyi Ahmad Oromoo dha. Nama eenyummaa Oromootti of beeku, ittiin boonuu fi dhaaba maqaa Oromoo qabu irraa filamee hoggansa biyya Itoophiyaa irra jiruu dha. Namni Oromoo kun hoggansatti milkaahuu bira dabree akka raajii hojjechuu danda’u baatii lama sadi qofa keessatti firattis diinattis agarsiisaa jira. Addunyaanuu ragaa bahuufii eegaltee jirti. Jabinni fi milkaahinni Dr. Abiyyi akka Oromootti ”nutis kunoo yoo carraa arganne biyya bulchuu itti beeyna, bulchuu qofa miti ajaa’iba agarsiisuu dandeenya” jennee akka itti boonnu nu godha.
Haa tahu malee gaaffiileen Oromoo hafan hedduu dha. Halkan tokkotti maa deebii dhaban jennee dallanuun xaxaa siyaasaa biyyattii sanaa dagachuu yookiis wallaaluu dha. Hunda caalaa ammoo shira TPLF tahe jedhee hoggansa kana ittiin gufachiisee kuffisuuf carraaqaa jiru quba dhabuu dha. Hoggansa nama kanaaf milkii hawwuu fi cinaa dhaabbachuuf dirqmatti miseensa yookiin deeggaraa OPDO tahuun nurra hin jiru. Oromoo tahuun qofti gahaa dha.
Biyyattii sana Amaarri bara heddu bulche. Tigireen itti aantee yeroo dheeraa beeynu kanaaf bulchaa baate. Oromoon akka Oromootti of beeku amma reef itti baha. Kanaafuu amma kan madaalamaa jiru dandeettii dhaaba siyaasaa osoo hin taane dandeettii sabaa ti. Oromoon biyya bulchuu hin danda’u olola jedhuun sabni kun moggaatti dhiibamee, abdii irraa muratee, hiree biyya sana irraa cabuu qofa laallachaa yoona gahe. Sun soba akka tahee fi Oromoon biyya bulchuu irratti warra kaanii olitti yoo tahe malee gaditi akka hin yaadamne agarsiisuuf xiiqeffachuu nu feesisa. Ilmaan Abbaa Gadaa jedhamuun qofti gahaa miti. Dalagaatti agarsiisanii warra eenyuyyuu caalaa muuxannoo domokraasii fi nagaan biyya bulchuu danda’u, hanqina warra kaaniiyyuu guutuu beeku tahuu keenya garsiisuu feesisa.
Har’a hoggansa nama kanaatiin Oromoo dhiisii sabni biraatuu siifan du’a ittiin jechaa jira. Kun kan heexoo itti tahee fuula itti suukaneessee garaa ishii yaasaa jiru Wayyaanee qofa jedheen yaada. Tarii hinaaftonni sirna duraanii tokko tokkos milkii kanatti keessa isaaniitti gammachuu dhabuu malu. Kanaaf sirna kana guutuutti diignee haaraa jaaruu qabna jechaa jiru. Humnoonni kun lamaan sababa mataa isaanii waan qabaniif nama hin raaju. Kana irraa kan hafe warri Oromoo tahee tarsiimoo warra diinaa qooddatu dhaabbatee of madaaluu qaba. Hoggansa tartiibaan gaaffii Oromoo bara dhibbaa hiikaa deemaa jiru kanaa fi hoggansa tortortuu OPDO waggaa 27f beeynu walitti dhoobanii akkuma tokkotti abaaruu fi itti duuluun hiriira diinaa keessa goranii mana ofii diiguu dha. Ummanni keenya kana sirriitti hubachuu fi eenyutu maal jedhaa jira kan jedhu eeggannoodhaan xiinxalaa deemuu qaba.